Umshini Wokugcwalisa Amafutha - Micvd.com
Lo mshini wokugcwalisa i-oyile ulusizo kakhulu ekugcwaliseni uwoyela emabhodleleni epulasitiki, emabhodleleni engilazi nasezitsheni zensimbi. Ukusetshenziswa kwemishini enjalo yokugcwalisa uwoyela kufaka phakathi amandla okugcwalisa izinhlobo eziningana zamafutha, njengomshini wokugcwalisa uwoyela wemifino, umshini wokugcwalisa i-oyili odlekayo, umshini wokugcwalisa uwoyela wokupheka, umshini wokugcwalisa uwoyela. Ngaphezu kwalokho lo mshini unezici ezimbalwa ezinhle kufaka phakathi isici sokudonsa kanye nekhono lokwenza ushintsho ezindizeni. Ungumshini osebenza kahle osebenza kahle ongabizi imali eningi ukuwunakekela.
Umshini wethu wokugcwalisa i-oyela wokupheka, i-oyili edliwayo, i-oyela yemifino, amajusi, u-oyili wezinwele, ukugeza izandla, uwoyela ocolisisiwe, uwoyela wesinaphi, uwoyela ophansi, i-injini kawoyela, i-motor oyili, i-lubricants, i-automotive Oils yokugcwalisa ngama-Heads Heads kuze kufike ku-16 Nozzle etcOur umshini wokugcwalisa uwoyela Izilawuli ezinobungane ze-PLC nge-HMI yokuthinta isikrini esinomuntu ngamunye wokugcwalisa ikhanda ukuze izimboni eziningi zifanele Umshini wokugcwalisa uwoyela, umshini wokugcwalisa i-oyili omshini, umshini wokugcwalisa i-mustard, umshini wokugcwalisa uwoyela, imishini yokugcwalisa i-oyili, ukugcwaliswa kwamafutha emoto umshini, umshini wokugcwalisa uwoyela, i-HDPE ingagcwalisa umshini, ingagcwalisa umshini, uJerry angakwazi ukugcwalisa umshini, umshini wokugcwalisa i-oyela yemifino, umshini wokugcwalisa i-oyela, imishini yokugcwalisa i-mustard, umshini wokugcwalisa i-injini, umshini wokugcwalisa uwoyela, umshini wamafutha egiya, umshini opholile umshini wokugcwalisa, i-lubricant filler, umshini wokugcwalisa owoyela uwoyela, umshini wokugcwalisa i-oyile, i-gear pump filler, i-flow metres filler, Le nqubo ivumela abaqhubi bethu bokugcwalisa ukufeza +/- 0.5% ukunemba nokuphindaphindwa.
Umshini Wokugcwalisa Amafutha Omnqumo Ozenzakalelayo
Umshini wokugcwalisa i-Autoamtic Olive Amafutha awuhlobo lwe-piston, okugcwalisiwe ngqo kungu-0.5%, umthamo wokugcwalisa usuka ku-100ml-5000ml futhi singaklama ukugcwalisa i-nozzle kusuka ku-2 nozzles kuya ku-16nozzles PLC Controls, isikrini sokuthinta, izingxenye zokuxhumana zebanga lokudla, insimbi engenasici kanye ne-anodized ukwakhiwa kwe-aluminium, nezinye izici eziningi kuza ngokujwayelekile. umshini wokugcwalisa i-oyili webhodlela, umshini wokugcwalisa i-olive olive
NPACK Umshini Wokugcwalisa Amafutha O-Olive Ozenzakalelayo wenzelwe ukwengeza ukusebenza kahle kunoma yimuphi umugqa wokukhiqiza osetshenziswa embonini yezimonyo, imboni yokudla, amakhemikhali akhethekile, amakhemikhali nezimboni zika-Oyili. Le Design iyi-piston hlobo, igcwalisa othomathikhi i-Cooking oil, i-olive yamafutha, i-motor uwoyela ebhodleleni. umthamo wokugcwalisa ngu-100ml-1000ml no1000ml-5000ml. Ukulethwa komkhiqizo kusuka kuthangi lakho ngobuningi kuya emaphayipini kungalungiswa ngethangi le-buffer lisebenzisa i-float sensing-sensing, a manifolded nge-ngqo, noma izindlela zokuphinda usebenzise.
1. 304 insimbi engagqwali esindayo insimbi engagqwali ashiselwe Uhlaka C.
2. Zonke izingxenye zokuxhumana zinsimbi engagqwali, san san, Teflon, Viton kanye hoses izidingo zakho.
3. Ivolumu enembile yokugcwalisa, ngaphakathi kwe-± 0.5% nekhawunta ephelele yebhodlela.
4. Ayikho ibhodlela eligcwaliswayo, isilawuli se-PLC
5. Imibhobho yokuntywila yokugcwalisa phansi phezulu kwemikhiqizo ekhihliza amagwebu
imodeli Umshini Wokugcwalisa Amafutha Oyi-Olive Ozenzakalelayo Oyenzakalelayo
Ukugcwalisa ivolumu I-100ml-1000ml ne-1000ml-5000ml
Uhlobo Lokugcwalisa Uhlobo lwePiston
Isivinini sokugcwalisa I-2000bottle / ihora (Ngokuya nge-6 nozzle ngo-1000ml)
Ukugcwalisa Kunjalo 0.5%
isiguquli samandla omoya I-0.6-0.8Mpa
Ifanele Ukupheka / lube / motor / umnqumo / imifino / uwoyela wezinjini / uwoyela we-sunlight
Ukudonsa ama-nozzles wokugcwaliswa okungaphansi kwemikhiqizo enwebayo uma kudingeka kutholakale iBottle umlomo.
Umshini wokugcwalisa uwoyela okuzenzakalelayo nokudliwayo
Singabakhiqizi abaphambili nabaphakeli boMshini Wokugcwalisa Amafutha Amafutha Ozenzakalelayo. Uhla lomshini ohlinzekwayo lakhiwa ngokusebenzisa izinto ezisezingeni eliphakeme ezisetshenziselwa izinto ezingavuthiwe kanye nobuchwepheshe besikhathi esizayo ukubhekana nezidingo ezikhulayo zamakhasimende ethu embonini egcwele uwoyela. Sinikezela ngomshini wethu wokupakisha i-Oyili ngentengo efanele emshinini.
Inkampani yethu ithole igama nodumo ekunikezeni Umshini Wokugcwalisa Amafutha Wokupheka kumakhasimende. Amafutha Agcwalisa Amafutha abhekisele ekugcwaliseni uketshezi ngomthamo womkhiqizo, olinganiswa yi-Flowmeter. Ijubane lokugcwalisa liyahlukahluka njengevolumu efanele ukugcwaliswa njengoba umshini ufakelwe umhlangano wokugcwalisa ongaphansi kanye nokulawula ivolumu okulungisekayo. Sakha le mishini sisebenzisa izindlela zekhwalithi njengamazinga ngamunye. Ifakwe kahle ngokulawula okuguquguqukayo yevolumu kanye nomhlangano wokugcwalisa ongezansi futhi isivinini sokugcwalisa sihlukile ngevolumu. Lo mshini wokugcwalisa usebenza ngesisekelo se-volumetric Continental ngokusebenzisa i-PLC elawulwa yi-Flow metres.
I-304 Insimbi engagqwali insimbi esindayo insimbi engenasici ene-C ifreyimu.
Zonke izingxenye zokuxhumana ziyinsimbi engenasici, i-sanitary, i-Teflon, i-Viton nama-hoses ngokwezidingo zakho.
Ivolumu yokugcwalisa okulungile, ngaphakathi ± 0.5% kanye ne-counter counter bottle.
Ayikho ibhodlela ayigcwali, ukulawulwa kwe-PLC
Izibhamu zokudonsa phansi ukuze kugcwaliswe imikhiqizo evumayo
imodeli Umshini Wokugcwalisa Amafutha Owoyela Ngokujwayelekile we-NP-VF
Uhlobo lwe-1 Linear lungenziwa izinhlobo eziningi zamabhodlela
2 Kulula ukuyigcina, akukho mathuluzi akhethekile adingekayo.
3 Alikho ibhodlela, akukho ukugcwaliswa, okuzenzakalelayo yokulawula i-PLC
Ama-nozzles a-4 avinjelwe ukugeleza ama-anti, usilika, ne-auto cut viscous liquid
Ivolumu enembile yokugcwalisa, ngaphakathi kwe-± 5-0.5% nekhawunta ephelele yebhodlela.
6 Izimpawu ezikhethekile noma ama-hoses ziyashintshwa uma uketshezi lubolile.
7 Diving nozzles for ukugcwaliswa okungaphansi kwemikhiqizo enezintambo uma kudingeka iBottle umlomo.
Umshini wokugcwalisa uwoyela ozenzakalelayo
Umshini wokugcwalisa i-Autoamtic motor / injini i-piston, uhlobo lokugcwalisa luyi-0.5%, umthamo wokugcwalisa usuka ku-100ml-5000ml futhi singaklama ukugcwalisa i-nozzle kusuka kuma-nozzles ayi-2 kuya ku-16 nozzles PLC Controls, isikrini sokuthinta, izingxenye zokuxhumana zebanga lokudla, insimbi engenacala ukwakhiwa kwe-aluminium yensimbi ne-anodised, nezinye izici eziningi kuza ngokujwayelekile.
NPACK Umshini Wokugcwalisa Amafutha Ozenzakalelayo / Injini wenzelwa ukwengeza ukusebenza kahle kunoma yimuphi umugqa wokukhiqiza osetshenziselwa izimonyo, imboni yokudla, amakhemikhali akhethekile, amakhemikhali nezimboni zikawoyela. Le Design iyi-piston hlobo, igcwalisa othomathikhi i-lube, uwoyela we-motor, uwoyela wenjini ebhodleleni. umthamo wokugcwalisa ngu-10ml-5000ml. Ukulethwa komkhiqizo kusuka kuthangi lakho ngobuningi kuya emaphayipini kungalungiswa ngethangi le-buffer lisebenzisa i-float sensing-sensing, i-manifold nge-draw eqondile, noma izindlela zokuphinda usebenzise.
Ivumela isivinini esisheshayo nokunemba okuphezulu okusebenzayo.
I-automatic volumetric piston pump yokugcwalisa ukwesekwa.
Nikeza ukugcwaliswa ngokunemba okuphezulu.
Uhlelo lokulawula oluthuthukisiwe lwe-PLC kanye nemvamisa yokulawula ukusebenza ngokuqondile.
Alikho ibhodlela akukho ukuxhaswa kokugcwalisa.
Ivumela ukusetha okulula kwesikhundla sokugcwalisa.
imodeli Umshini Wokugcwalisa Amafutha Ozimoto Ozenzakalelayo we-NP-VF
Ifanele Ukupheka / lube / motor / olive / imifino / uwoyela weinjini
Inzwa ye-elekhthronikhi engaxhumana nayo yokuqinisekisa uhlelo lwe- "akukho bhodlela aligcwalisi".
AbakwaMitsubishi benza uhlelo lwe-PLC ngesilawuli se-T "touch screen ne-VFD yokulawula ijubane lokuhambisa
Igumbi lokulinganisa laseJalimane lokuphindaphinda okungcono okungu-0.05%